သီရိ's Comments - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမိသားစု၏ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းအတွက် ပါဝင်ကုသိုလ်ယူလှူဒါန်းနိုင်ပါသည်
၂၀၁၃ - မေလတစ်လတာအတွက် အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးဆောင်းပါးပိုစ့်ဆုရှင် ကြေငြာခြင်း
"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (အက်ဒ်မင် ကိုညီညီတင်နှင့် ဆရာတော်အရှင်ဝဏ္ဏတို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
← Back to သီရိ's Page
5:44pm အချိန်June 10, 2012, တွင်စိုးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ 3:08am အချိန်December 21, 2011, တွင်aungaung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 10:51am အချိန်December 20, 2011, တွင်Ashinkhemeinda မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မဂ်လာပါဒကာမကြီး..။ခုလိုမျိုး တစ်ကူးတစ်ကန့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ဒကာမကြီးလဲ သာသနာကို ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ကျန်းမာအသက်ရှည်ပါစေလို့ ဦးဇင်းမှ မေတ္တာပို့ပါတယ်...................။ 1:49am အချိန်December 1, 2011, တွင်aungaung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်သွားပါတယ်ကောင်းသောနေ့ လေးပါ 4:27pm အချိန်November 28, 2011, တွင်aye min tun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမလေးရေ မင်္ဂလာပါနော်။အကိုလဲပြန်လာလည်သွားပါတယ်
နေကောင်းကျန်းမာပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်တွေကိုအမြဲပိုင်ဆိုင်ပါစေနော် 2:03pm အချိန်November 28, 2011, တွင်ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါနော် သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် မင်္ဂလာ ရှိသော နေ့တစ်နေ့ကို မွန်မြတ်သော ပရဟိတ အလုပ်လေး တစ်ခုလောက်လုပ်ရင်း ဖြစ်သန်းကြအောင်နော်
ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် ပန်းလေး တစ်ပွင့် လက်ဆောင်ယူလာတယ် … 8:23pm အချိန်November 19, 2011, တွင်aye min tun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလည်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ညီမလေးး။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ 4:20am အချိန်November 18, 2011, တွင်ဘိုဘိုအောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မမ ....နေကောင်းတယ်နော် ....မောင်လေးလည်းသတိရပါတယ်...ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်နော်... 8:01am အချိန်November 16, 2011, တွင်aye min tun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမလေးသီရိရေ။ ပြန်လာလည်သွားပါတယ်။အစစအရာရာအတွက်ကျေးဇူးနော်။ ညီမလေးကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ 1:16am အချိန်November 14, 2011, တွင်Ashin Nyana Dipa မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဒကာမ မသီရီရေ.... ကိုညီက ဒီလကုန်မှ အားလပ်မယ်ကွဲ့။
ဒါကြောင့် ကိုစစ်ဦးအောင် နာမည်နဲ့ ပို့ထားပေးပါ။
လောလောဆယ် အဲဒီ လူငယ်လေးက လက်ခံပေးထားပါတယ်။
မြ၀တီကို ရောက်ရင် ငွေလွှဲပေးဖို့ ကိုစစ်ဦးအောင် ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါဦးကွဲ့။
တစ်လ ငါးထောင်ကျပ်နဲ့ ၆ လစာ အလှူငွေစာရင်းထဲ ကို ဘုန်းဘုန်း ရေးထည့်ထားလိုက်ပါပြီ။
အလှူငွေ ပါဝင်လှူဒါန်းတဲ့ အတွက် အဖွဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘုန်းဘုန်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်.....
လက်ခံရရှိပြီး အလှူငွေနှင့် စုစုပေါင်း အလှူငွေ စာရင်း (ပြည်ပနှင့် အခြားတိုင်း ဒေသကြီးများ)... http://buddhismworld.ning.com/group/Myanmar/forum/topics/6371237:Topic:140119
ကိုစစ်ဦးအောင် - Tel : > 0943089559
- Email > thatha1333@gmail.com
- Address > အမှတ် (၈) A၊ အဝေရာလမ်း၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် 3:28am အချိန်November 13, 2011, တွင်ဘိုဘိုအောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါ....မမသီရိ နေကောင်းပါတယ်နော်....ကျွန်တော်ဘိုဘိုလာလည်သွားပါတယ်... 7:59pm အချိန်November 11, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်
မသီ၇ိရဲ့ ပရဟိတ အလှူအတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓုခေါ်ပါတယ်သာဓု သာဓု သာဓုပါ
ကျန်းမာသောခန္ဒာတို့နှင့် အဆုံး၌ လိုချင်သော ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံး ရောက်ပါစေလို့ " ပေးဆပ်ခြင်း၌ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့" မိတ်ဆွေများကိုယ်စား ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Friends18.com Flowers Scraps 1:54pm အချိန်November 7, 2011, တွင်Ashin Nyana Dipa မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အေးကွဲ့... ဒကာမကြီး မသီရိ....
လစဉ် အလှူငွေ ၅၀၀၀ ကျပ် ပါဝင်လှူဒါန်းတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် သာဓုခေါ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ အလှူငွေ လက်ခံ ယူပေးမယ့် တာဝန်ခံ ကို ဘုန်းဘုန်း ဆက်သွယ်ပေးပါ့မယ်။
လစဉ် အလှူရှင် စာရင်းထဲမှာတော့ မသီရိ အမည်နဲ့ စာရင်းသွင်းထားလိုက်ပါပြီ... 8:15pm အချိန်October 31, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်ပါတယ် . ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်... 6:04pm အချိန်October 12, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ စန္ဒာ လာလည်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်။ 6:29am အချိန်September 29, 2011, တွင်ဘိုဘိုအောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။့ hi ............. ကျေးဇူးအထူး....ပါမမ နေကောင်းတယ်နော် 12:28am အချိန်September 25, 2011, တွင်စိုးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်သွားပါတယ်ညီမရေ။ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ 4:49pm အချိန်September 24, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ စန္ဒာ လာလည်ပါတယ်.ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်. 12:59am အချိန်September 15, 2011, တွင်စိုးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်ပါတယ်နော်။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ။ 4:25am အချိန်September 11, 2011, တွင်ဘိုဘိုအောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မမသံယောဇဉ်(ခ)မမ မုန်း နေကောင်းတယ်နော်.. ...မမရယ် ဘာဖြစ်လို့မုန်းဆိုတဲ့နမ်မည်ကြီးပြောင်းပြစ်လိုက်ရတာလဲ... (စိတ်မဆိုးနဲ့)ခေါ်လို့မကောင်းလို့...ဘိုင်ဘိုင် မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
Khin Myo Sint ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ဘုန်းဘုန်း ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Thaung Tan ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
ကိုညီညီတင် ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
"တစ် နှစ် သုံး ပဟေဠိ ၏ မူလ အစ "
"အသက်ရှု ကျပ်စရာကောင်းတဲ့ သူ"
ကိုယ့်သန္တာန်မှာ တရားရှိ၊ မရှိ၊ ဓမ္မမှတ်ကျောက်ပေါ် တင်ကြည့်ပါ။
ဒီဘုန်းကြီးကို ဒကာတို့ မကြည်ညိုဘဲ နေနိုင်သည်…
ရဟန်းတော်များနှင့် မပညတ်ရသေးသောဝိနည်းများ (ဥပမာ အင်တာနက်သုံးခြင်း)
““အမှောင်ကမ္ဘာမှ ညည်းညူသံ”” (ကိုယ်တိုင်ရေး)
"မင်းကွန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ"
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် သောဘိတမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
သံသရာခရီးသွားရင်း အမှားလုပ်ခဲ့မိတဲ့ ဘုရားလောင်းတော်။
လူတိုင်းအတွက် " မိတ်ဆွေကောင်း”
မြတ်ဘုရား၏ တနေ့တာ လုပ်ငန်းစဉ် (၅) မျိုး
1. အူမနှင့် သီလ
2. သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး
3. "ဘ၀ကောင်းတစ်ခု ရချင်ရင်ငါးပါးသီလလုံခြုံမှဖြစ်မယ်"
4. ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း
5. ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ
6. (၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း
7. ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်တို့ မလုပ်မနေရသော ကိစ္စများ
8. ရှင်ရာဟုလာနဲ့ တံမြက်စည်း
10. "ကစား နေတာ ကြာနေပြီဖြစ်လို့ ကျွန်တော် နားသင့်ပြီ"
11. ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ
12. ဆုတောင်းများလှတဲ့ သြကာသ ကန်တော့ချိုး
13. ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော် ကောဏ္ဍညမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
14. ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား
15. အာနာပါန အကျိုး ၅-မျိုး
16. တရားအလှူက ဘာကြောင့် မြတ်သလဲ
17. ဘဝရဲ့ တစ်နေ့တာကို သိက္ခာ သုံးပါးနဲ့ ဖွင့်ပါ
18. ဥပုသ်ရက်သတ်မှတ်ပုံနှင့် အနှစ်သာရ။
19. ဝိပဿနာ ဘာဝနာကုသိုလ်၏ အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပုံ
20. ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာ ၂
Top News · Everything Khin Myo Sint postedastatus"အမှားတစ်ခုကိုသိပြီးအမှန်ပြင်ဖို့ဝန်မလေးသူဟာလူတော်ပါ။"4 minutes ago 0
Thaung Tan liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…'16 minutes ago♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ commented on ကိုညီညီတင်'s blog post '"တစ် နှစ် သုံး ပဟေဠိ ၏ မူလ အစ "'"Thanks .."42 minutes ago♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ liked ကိုညီညီတင်'s blog post '"တစ် နှစ် သုံး ပဟေဠိ ၏ မူလ အစ "'43 minutes agoမတင်တင်မိုး liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…'56 minutes agoNyi Nyi Aung liked thein wai's blog post 'ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှင့်အတူ ဆုတောင်းချွတ်ချော်မှုများ။'1 hour agoNyi Nyi Aung liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…'1 hour agoမတင်တင်မိုး liked မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'1 hour agoကိုညီညီတင် posted blog posts"တစ် နှစ် သုံး ပဟေဠိ ၏ မူလ အစ ""အသက်ရှု ကျပ်စရာကောင်းတဲ့ သူ"1 hour agozayar aung commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'"တရားအသိ မျှဝေမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်"1 hour agozayar aung liked မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'1 hour agoကိုညီညီတင် leftacomment for Khin Myo Sint"လေးစားခင်မင်ရသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဆရာမ " Khin Myo Sint " ခင်ဗျား..
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ တွင် မိမိ…"1 hour ago More... RSS